Vehivavy, fahefana, tombondahiny ary ny vokatry ny lahatsarin’ny Black Friday ao Pakistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2015 5:03 GMT
Pikantsary namboarina tamin'ny lahatsary misy ireo olona mifanjevo mandritra ny fiantsenana Zoma tao Pakistan. Sary namboarin'ny mpanoratra.
Isan-taona mandritra ny varotra “Black Friday” (Zoma Mainty), aorian'ny Androm-pisaorana (Thankgiving) ao Etazonia, nalaza tao amin'ny aterineto ny lahatsary ahitana fifampitolomana ao anatin'ny fahadalam-piantsenana ao amin'ny toeram-pivarotana “lehibe” tahaka ny Walmart sy Target.
Tamin'ity taona ity tao Pakistan, tamin'io andro io, nisy lahatsary iray niparitaka ahitana vehivavy miady mandritra ny tsingeritaona voalohan'ny varotra tao amin'ny magazay mpivarotra antsinjarany Sapphire, izay milaza fa manome “fitafiana avo lenta takatry ny besinimaro.”
Natao hampisy firohotana bemanadala —tahaka ny fihenambidy manokana mandritra ny “Black Friday” ao amin'ny Walmart— ny varoboba tao amin'ny Sapphire. Nahenan'ny Sapphire hatramin'ny 50% ny vidin'entana tsara kalitao sy be mpitsiriritra saingy misy fetr'isa. Ka izay tonga aloha ihany no mahazo.
Misy ny miantso izany ho fifaninanan'ny tsena. Mivarotra atsinjaran'ny fanatanjahatena mifampikasoka, notefena hanosehana sy hifanisika.
Ao amin'ny Walmart na ao amin'ny Target, matetika ireo kilalao malaza sy lalao videô kasain'ireo ray aman-dreny hovidiana mandritra ny varoboba hatao fanomezana krismasy ny zanany no miteraka fifanosehana. Fianakaviana izay tsy hahatakatra ny vidiny amin'ny fotoana tsotra no manangombola mandritra ny taona ahafahana mividy zavatra maro dia maro. Nampiseho ny fanadihadiana fa ny mampiavaka ireo mpividy mandritra ny Black Friday dia ireo vitsy an'isa tsy fotsy hoditra, na ray na reny toka-tena. milahatra mandritra ny ora maro tsy hividy afa-tsy zavatra iray, ka raha vao misokatra ny varavarana dia raikitra ny firohotana ka foana ao anatin'ny minitra vitsy monja ny talantalana. Ny fahadisoampanantenana sy ny fahavitsian'ny entana no miteraka fangaro mampidi-doza, ka mahatonga ny sasany ho very saina tsy mahafehy tena intsony.
Reehfa nahita ny rohin'ny lahatsary ahitana fifanosehana tao amin'ny Sapphire aho tao amin'ny Twitter, dia tsy noraharahiako izany, tahaka ny tsy iraharahiako ny fifampitolomana mandritra ny Black Friday. Noho izaho manohitra ny fitiavam-panjifana, dia tsy mahita tombony amin'ny faniratsirana ireo mpanjifa maningatsingana aho. Fa ny ataoko dia ny miezaka ny mahatakatra ilay rafitra lehibe mamorona sy mampitoetra maharitra ity fitiavan-kahazo harena hita maso ity.
Niova tanteraka anefa ny raharaha rehefa hitako fa nihamaro ireo olona nizara ny lahatsary. Tantaran'ireo mpanjifa vitsivitsy miady fitafiana mivadika ho fanalam-baraka ireo “nenitoa manana tombondahiny, materialista”. Tahaka ny mandre amin'ny fanehoan-kevitra hitanao any Etazonia rehefa “aelin'ny mpanankarena ny lahatsarin'ny fifampitolomana mandritra ny Black Friday hanalana baraka ny mahantra” ary tsy mandeha ilalana mihitsy izany manana tombondahiny manala baraka ny mahantra izany.
Fa angaha tsy “manana tombondahiny” ireo vehivavy ao amin'ny lahatsary ireo? Mety ho izany ny sasany ary tsy izany ny sasany. Misy amin'ny ambaratongan-drafitra rehetra ny tombondahiny sy ny fahefana, indrindra fa amin'ny firenena tahaka an'i Pakistan. Ny lahatsary sy ny hafanampo amin'ny fampielezana azy no mahatonga ahy hiato ka hihevitra ny antony mahatonga ity fahadalana ity ao Pakistan.
Tsy midika izany fa manaiky ny herisetra amin'ny endrika samihafa aho, indrindra amin'ny herisetra noho ny fitafiana. Ny olona mahafantatra ahy dia mahay fa miala tsiny amin'ny seza voadonako aho. Noho izany dia tafahoatra amiko izany manamarina herisetra tahaka izao izany. Saingy tsy maintsy mieritreritra aho fa zavadehibe ny miato sy ny mihevitra ireo singa mety hiteraka faharomotana tahaka izao.
Misy ve ny andraikitry ny rafi-piarahamonina ao Pakistan manome valisoa hatrany ireo vehivavy sy zazavavy mampidera ny fananankarena sy mandositra mandrakariva ireo tsy manana izany tombondahiny izany?
Angamba miady mihoatra noho ny fitafiana iray ireo vehivavy hita ao amin'ny lahatsary. Angamba ahafahan'ny fianakaviana sasantsasany manivaka hahazo karazan-tombondahininy tsy ho takatry ry zareo ho an'ny zanany vavy amin'ny fotoana tsotra ny varoboba, tahaka ireo ray amandreny atao anjorombala ao Etazonia miatrika ny hatsiaka noho ny varoboban'ny Black Friday satria miaina ny fiarahamonina misy azy dia mampiaka-danja ny satan'ny zanany amin'ny kilalao ananany na ny akanjo anaovany.
Na mety koa hoe ny sasantsasany amin'ireo vehivavy ireo raha ny marina dia “vehivavy avy amin'ny fianakaviana manankarena” voatery miaina ao anatin'ny tetibola tery dia tery.
Toe-javatra roa samihafa, rafitra roa tsy azontsika andosirana.
Eny fa na dia any an-tanandehiben'i Pakistan aza dia fahita mahazatra io toe-javatra farany voalaza ahitana ireo “manana tombondahiny” io izay vokatry ny tsy fifandanjan-kery sy tombondahiny eo amin'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny ankohonana iray. Misy ireo lehilahy mifehy manontolo ny fandaniambolan'ny fianakaviana; tsy mahazo miasa ivelan'ny tranony ny vehivavy ao amin'ny fianakaviany. Kiviana ny vehivavy sasany tsy hiasa, na kivian'ny fahasarotana isan-karazany atrehina rehefa miasa any Pakistan tsotra izao ry zareo, ka anisan'izany ny fanohitohinana ara-nofo tsy misy fanasaziana, ny fitateram-bahoaka tsy sahaza, ary ny kolontsaina ankapobeny efa vonton'ny fankahalam-behivavy. Hoan'ny maro amin'ny vehivavy, ny fiainam-piarahamonina sy ny fivoahan'ny fianakaviana ivelan'ny trano dia voafetra amin'ny fivoriam-pianakaviana na lanonan'ny mpifankafantatra, ka any no antenain'izy ireo hanehoana ny tsara indrindra avy amin-dry zareo, angamba amin'ny alalan'ny fitondrana fitafiana avy ao amin'ny tranombarotra Sapphire.
Mijery ireo lahatsarin'ny tao Sapphire aho ary mieritreritra ireo vehivavin'ny tanandehibe pakistaney—eny fa na ireo heverina ho “manana tombondahiny” aza—voaendaka, voatositosika ary voasisika ho any amin'ny toeranasy toe-javatra mahalasa adala – tsy noho ny safidy fa noho ny tefibika.